HERO OF MYANMAR: အသုံးမကျ (၈) လ
[15:03 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
ဒေါ်စုကြည်တစ်ယောက် အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာတာ (၈) လ တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲတက်လိုက်၊ ဓာတ်ပုံပြပွဲတက်လိုက်၊ ဈေးရောင်းပွဲသွားလိုက် နဲ့ပဲ ရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို မြန်မာပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အကျိုးမရှိစွာဖြင့်ပဲ အံ့သြောဖွယ် အသုံးချလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် နှင့် ပင်စင်လစာ တိုးမြင့်ရေးအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူပေါင်းများစွာရဲ့ အခြား မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ လူပြောမသန် လူသန်မပြောဆိုသည့်အတိုင်း ဒေါ်စုကြည်က "ရက်(၁၀၀) ဆိုတာ သိပ်ကြာလှတဲ့ ကာလ မဟုတ်ပေမည့် တကယ် လုပ်ချင်ရင်တော့ သိသာအောင်လို့ လုပ်နိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်" လို့တောင် သူခိုးက လူပြန်ဟစ်ပြနေပါသေးတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဆိုသူကြီးကို ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မေးပါရစေ
၁။ ဒေါ်စုကြည်ကရော ရက် (၂၀၀) ကျော် မှာ ဘာတွေ သိသောအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါလဲ??
၂။ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ "မဲထည့်စရာ NLD ပါတီမရှိရင် မထည့်နဲ့ပေါ့" ဆိုတဲ့စကားကြောင့် မဲမထည့်လိုက်တဲ့သူတွေအတွက် (၈) လကြာနေပြီ ဘာတွေ ပြန်လုပ်ပေးခဲ့ပါလဲ??
၃။ အခြေခံဥပဒေကို ကြက်ခြေခတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက် (၈) လ အတွင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီလဲ??
၄။ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံဆိုလို့ လိုက်ပြီး ညီလာခံလိုက်ကြရသူတွေအတွက် ရက်ပေါင်း (၂၀၀) ကြာချိန်ထိ ညီလာခံဘယ်အဆင့်ထိ ပြီးအောင် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီလဲ??
၅။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Burma ဆိုလို့ Myanmar လို့တောင်မပြောနိုင်တော့ပဲ Burma လို့ အော်နေကြသူတွေအတွက် ဘာတွေရပ်တည်ပေးခဲ့ပါသလဲ??
၆။ ပြည်ပကနေ အန်တီစု လုပ်သမျှ အကုန်မှန်တယ် ဆိုပြီး မျက်စိစုံမိတ်ထောက်ခံနေကြတဲ့ ပညာမဲ့ အစွန်းရောက်တွေအတွက် ဘာအာမခံချက်တစ်ခုရအောင် (၈) လ အတွင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ??
၇။ အစိုးရဝန်ထမ်းပင်စင်စား သက်ကြီးတွေ အတွက် ရက် (၁၀၀) အတွင်းမှာ အစိုးရက ပင်စင်လစာတိုးပေးခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအဘိုးကြီးများ စုဝေးရာ NLD က အဘိုးကြီးတွေအတွက် နောက်ဆံမတင်းရအောင် ရက် (၂၀၀) အတွင်းမှာ ဘာတွေ စီမံပေးပြီးပြီလဲ??
ပင်စင်မတိုးချင်နေပါ အသက်လေး တိုးပေးပါအုံး သိပ်မကျန်တော့လို့
၈။ ဝီကီလိခ်က NLD နဲ့ အဖိုးကြီးတွေ ကို ဝေဖန်ထားတာကို သူတို့ဖက်က ဘယ်လိုများရပ်တည်ပြီး ဘာတွေများ တုန့်ပြန် ပြောခဲ့လို့လဲ??
၉။ ဈေးရာင်းဆိုလို့ ရောင်းခဲ့ရသူတွေ၊ ခွေးကျောင်းဆိုလို့ ကျောင်းခဲ့ရသူတွေနဲ့ ကင်မ်အဲရစ်ကို ဝိုင်းကြီးပက်ပက်လုပ်ပြီး လက်ဆန့်ကာကွယ်ခဲ့ရသူတွေအတွက် အနာဂါတ် ခိုင်မာအောင် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ??
ဈေးရောင်းရင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး ထူထောင်ကြပါစို့
NLD ပါတီဝင်တို့၏ ခွေးကျောင်းခြင်းပညာဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ထောင်ကြပါစို့
၁၀။ နယ်စပ်ဒေသက တိုက်ပွဲတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းအောင် ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ??
၁၁။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးပြေလည်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့ ပြည်ပမှာ ကျောင်းတတ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် (၈) လ အတွင်းမှာ ဘာတွေ အခွင့်အရေးပိုရအောင် လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ??
၁၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျခံစဉ်က လွတ်မြောက်ဖို့ ပိုက်ဆံပျက်တိုင်း ဆန္ဒပြခဲ့ရသူတွေအတွက် လွတ်ပြီး (၈) လ အတွင်းမှာ ဘာတွေပြန်လုပ်ပေးပြီးပြီလဲ?? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတဲ့အိကျီကိုဝတ်ပြီး တီဗွီကို ကုန်းနန်းခဲ့ရသူတွေအတွက် ဘာမျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီလဲ??
လွတ်ရင်တော့ ထူးမှာသေချာတယ် အခွင့်အရေးပိုရအောင် အိုဗာတင်းလိုက်အုံးမှ
၁၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကို ဘုရားဘေးမှာထားပြီး ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ဦးချခဲ့ကြရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ရက်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်အတွင်းမှာ ဘာများ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီးလဲ??
၁၄။ NLD LA မလေးရှားရဲ့ ကဒ်အတုလုပ်တာတွေ၊ အချင်းချင်းဂုတ်သွေးစုတ်တာတွေ၊ ဖျက်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုတာတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘာတွေများ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးခဲ့လို့လဲ??
၁၅။ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ခိုင်းလို့ မှတ်ပုံမတင်လိုက်ရတဲ့ NLD ပါတီ အတွက် မပျက်အောင် ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ?? ပါတီကို ကယ်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်တိုင်တောင် သတိပေးခံရလို့ မေတ္တာရပ်ခံနေရပြီမဟုတ်လား??
လက်ငါးချောင်း ထောင်ထားပါတယ်။ ၅ နှစ်ကြာရင်တော့ ထူးခြားပါမယ်ရှင်။